China N'ogbe omenala nonstandard metal worm Gears bevel gia pinion gia emepụta na suppliers | Zhongfu Cemented
N'ogbe omenala na-abụghị ọkọlọtọ metal worm gia bevel gia pinion gia
Ụlọ ọrụ ndị ọdabara:
Ụlọ ahịa ihe owuwu ụlọ, ihe ọkụkụ na-emepụta ihe, ụlọ ahịa ndozi igwe, ugbo
Mgbe ọrụ akwụkwọ ikike gasịrị:
Nkwado teknụzụ vidiyo
Ebe Ọrụ Mpaghara:
Ebe ngosi ihe ngosi:
Nyochaa ọpụpụ vidiyo:
Akụkọ ule igwe:
Ụdị ire ahịa:
Ngwaahịa ọhụrụ 2020
Akwụkwọ ikike nke ihe ndị bụ isi:
Akụkụ bụ isi:
Steel, Tungsten Carbide
Ihe osise nke ndị ahịa
Nguzogide iyi dị elu
Nke kacha elu
Enwere ọtụtụ oghere dị warara n'elu eze ka ọ na-etolite n'ọnụ ọnụ, a na-eji ngwá ọrụ na-emepụta ihe eji eme ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dịka ụkpụrụ nke nkwụsị nke helical gia. N'oge nhazi, ngwá ọrụ ahụ na-ebipụ ezigbo ibe dị ka ajị agba site na nha nha nha nke ngwa ahụ, ya mere a na-akpọ ya onye na-akpụ afụ ọnụ. A na-eji ndị na-akpụ afụ ọnụ emecha ezé gia mgbe ihicha ihe na ịkpụzi ngwa (lee nhazi gia). Ihe na-egbutu gia dị ka diski a na-ejikarị eme ihe dị ka ngwa cylindrical cylindrical siri ike (Foto 1). Oghere dị n'elu eze nwere ụdị abụọ: otu bụ na a na-emepe oghere okirikiri ma ọ bụ gburugburu na mgbanaka gia dum. Akụkụ obe nke uzo nwere ike ịbụ akụkụ anọ ma ọ bụ trapezoidal. Onye na-akpụ afụ ọnụ a na-amụcha ihu ihu (oghere) mgbe ọ kwuchara. Ọ dị mma maka ịkpụ ndị na-akpụ akpụ na modulu na-erughị 1.75 mm; nke ọzọ bụ na oghere ndị dị n'akụkụ abụọ ahụ enweghị ike ịgafe, bụ nke a na-etinye iche iche na ntinye nke nwere ụdị mbo. Iji mee ka ntinye nwere ike ịdọrọ mma ahụ, a na-etinye ya na mgbọrọgwụ nke ezé ọ bụla. Gwuo oghere ndị nwere nkụja. Mgbe ụdị ịkpụcha ntutu dị otú a na-ada ụda, ọ kwesịrị ịkwagharị profaịlụ eze na elu cylindrical nke eze n'elu. Mma na-akpụ isi
Iji belata nbibi nke nha nha ọ bụla, ọnụ ọgụgụ nke ezé nke onye na-akpụ ihe na-akpụ ihe dị ukwuu, a na-ejikarị ọnụ ọgụgụ isi mee ihe iji zere ihe na-emekarị na ọnụ ọgụgụ nke ezé nke gia ga-ebipụ, ma ọ bụghị njehie ahụ. A ga-e copyomi onye na-akpụ isi ihe na ngwa a ga-edozi ya. Dị ka mba ụkpụrụ, na nkenke gia shaving cutters nwere atọ ụdị: AA, A na B. Na n'ezie mmepụta, gia nha nha profaịlụ shaving na ziri ezi involute eze profaịlụ ịkpụ cutter mgbe deviates si ziri ezi involute akara nso pitch okirikiri nke. ngwa ahụ, ma na-atụgharị n'ime ya, yana ngbanwe nke ihe dịka 0.01 ruo 0.03 mm. Ngbanwe profaịlụ eze nke gia spur dị ukwuu karịa nke ngwa ngwa helical. Iji nweta profaịlụ nha nha ziri ezi nke workpiece, a ga-edozi profaịlụ eze nke onye na-akpụ afụ ọnụ. N'imepụta oke, a na-ekpebi usoro mgbazi profaịlụ eze nke onye na-akpụ afụ ọnụ site na ụzọ nnwale.
Onye na-akpụ afụ ọnụ nwere ike hazie ngwa ngwa n'ime na mpụta cylindrical kwụ ọtọ na nke mpụta, yana nrụpụta nrụpụta dị elu yana elu dị larịị. Na mgbakwunye, e nwekwara ndị na-akpụ afụ ọnụ worm gia maka nhazi nkenke ngwa worm. Ụdị na paramita nke gia worm bụ isi kwesịrị ịbụ otu ihe eji arụ ọrụ worm gia dabara na ngwa ikpuru. Dị ka onye na-akpụ afụ ọnụ gia, ọ nwere ọtụtụ oghere dị warara n'elu okirikiri iji mepụta ọnụ ọnụ ma nwee ibe. Ndị na-akpụ afụ ọnụ worm gia siri ike ịrụpụta ma a na-eji ya naanị mgbe ị na-arụ ọrụ gia worm nke chọrọ oke nkenke.
Ọ nwere ike ịbụ akaụntụ anyị iji mezuo mmasị gị ma nye gị nke ọma. Afọ ojuju gị bụ ụgwọ ọrụ anyị kachasị. Anyị na-achọ ụzọ gaa n'ihu nleta gị maka uto nkwonkwo maka nnukwu ego China High Quality Carbide Cold Heading Parts maka igwe, Biko zitere anyị nkọwapụta na ihe achọrọ, ma ọ bụ nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ ị nwere.
Big discounting China Mold, Fastener Mold, Iji izute ihe ahịa chọrọ na ogologo oge mmepe, a 150, 000-square-mita ọhụrụ factory a na-ewu, nke a ga-etinye n'ime ojiji na 2014. Mgbe ahụ, anyị ga-nwe a nnukwu ikike nke imepụta. N'ezie, anyị ga-anọgide na-emeziwanye usoro ọrụ ahụ iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ, na-eweta ahụike, obi ụtọ na ịma mma nye onye ọ bụla.
"Quality mbụ, Ime ihe n'eziokwu dị ka isi, ezi ụlọ ọrụ na otu uru" bụ echiche anyị, nke mere na ị nwere ike ịmepụta anọgide na-achụso mma maka 2019 New Style China Tungsten Carbide Cold Formers anwụ Forging Ngwá Ọrụ Parts, Isi n'ime obere azụmahịa echiche nke Top àgwà mbụ, anyị chọrọ imezu ọtụtụ ndị enyi n'ime okwu ahụ ma anyị na-atụ anya inye gị ngwọta na ọrụ kacha mma.
2019 New Style China Forging, akụkụ mapụtara, ị ga-enwe mmetụta efu iji zitere anyị nkọwapụta gị, anyị ga-aza gị ngwa ngwa. Anyị nwere ndị injinia nwere nkà iji jee ozi maka mkpa ọ bụla dị omimi. Enwere ike izipu ihe nlele efu n'okwu gị n'onwe gị ka ịmatakwu eziokwu. Ka ị nwee ike mezuo ọchịchọ gị, jide n'aka na ị na-eche na ị nweghị ego ị ga-akpọtụrụ anyị. Ị nwere ike izipu anyị email wee kpọọ anyị ozugbo. Ọzọkwa, anyị na-anabata nleta na ụlọ ọrụ anyị si n'akụkụ ụwa niile maka ịmatakwu ụlọ ọrụ anyị. nd ngwa ahia. N'ahịa anyị na ndị ahịa nke mba dị iche iche, anyị na-agbasokarị ụkpụrụ nke nha anya na uru otu. Ọ bụ olileanya anyị ịzụ ahịa, site na nkwonkwo mbọ, ma ahia na ọbụbụenyi ka anyị na-erite uru. Anyị na-atụ anya inweta ajụjụ gị.
Ngwa Tungsten Carbide Tamping Tine Ụdị Ọhụrụ f...
Omenala mere nnyefe reverse na-abaghị uru gia kpakpando...
Tungsten Carbide Vs Carbide, Dureza Del Titanio, Akụkụ omenala & eyi, Akụkụ Carbide Yiri, Carbide Punch ma nwụọ, Nkọwapụta Cnc Machining China,